Filtrer les éléments par date : vendredi, 25 octobre 2019
vendredi, 25 octobre 2019 23:08
« AKORY E! »: Atrikasa fampiroboroboana ny fitenim-paritra
Hotanterahina eo amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny 29, 30, 31 oktobra 2019 ny hetsika « AKORY E! », izay atrikasa fampiroboroboana ny fitenim-paritra karakarain’ny fikambanana GASIKO.
Ny fahatsapana fa maro ny samy Malagasy tsy mifankahazo eo amin’ny fiteny, noho ny tsy fahampian’ny fahalalana ka mampisy elanelana no nanosika ny fikambanana hikarakara ity hetsika ity, miaraka amin’ny ministeran’ny kolontsaina sy serasera, ary anisan’ny tanjona amin’ny fanatanterahina ity hetsika ity ihany koa ny hampidirana ny fianarana fitenim-paritra ho ao anatin’ny rafi-pampianarana Malagasy.
vendredi, 25 octobre 2019 23:00
Bolivie: Voafidy ho filoha tamin’ny fihodinana voalohany i Evo Morales
47,07% amin’ny vato manankery no azon’i Evo Morales, 36,51% ny an’i Carlos Mesa mpifaninana aminy. Ampy hahavofidy azy ho filoha tamin’ny fihodinana voalohany ny elanelana 10% amin’ny mpifaninana manaraka azy araka ny lalàna manankery any Bolivie.
Miteraka resabe any Boivie ity fifidianana ity, tsy mbola vokatra ofisialy rahateo io, na dia efa nanao fanambarana azy i Evo Morales fa voafidy indray hitantana an’i Bolivie izy.
Tamin’ny taona 2006 i Evo Morales no efa teo amin’ny fitondrana. Fotoam-piasana fahaefatra ho azy indray ity, hitondra an’i Bolivie eo anelanelan’ny 2020 hatramin’ny 2025.
vendredi, 25 octobre 2019 22:57
Antsiranana: Nodarohin’ilay mpiadina bakalôrea ny « Chef de centre » fa nanitsoka azy ho nanao « fraude »
Tovolahy iray, mpiadina bakalôrea « série D », mpianatry ny lycée Zafy Albert Antsiranana no nahavita namely totondry ny lehiben’ny foibem-panadinana Antsiranana I, ny alakamisy 24 oktobra 2019 fa nilaza fa nanao « fraude » ilay tovolahy.
Vehivavy, mpampianatra ao amin’ny polyteknika amin’ny oniversiten’Antsiranana ity lehiben’ny foibem-panadinana voadaroka ity. Nahazo « repos médical » izy noho ny dona nahazo azy.
Nosamborina ny harivan’ny alakamisy ilay tovolahy ary atao fanadihadiana eny amin’ny Polisy amin’izao fotoana izao.
Fantatra fa 50 000 Ariary ny tambiny homena izay mahatrata mpiadina manao « fraude ».
vendredi, 25 octobre 2019 22:47
Fifidianana kaominaly: Ho tonga rahampitso ireo fitaovana natonta tany Afrika Atsimo
Higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny tolakandron’ny sabotsy 26 oktobra 2019 ireo taratasim-pifidianana natonta tatsy Afrika Atsimo, anisan’izany ireo taratasy hanaovana firaketana an-tsoratry ny voka-pifidianana, ireo valopy tsy andairan-kosoka, sy kojakoja hafa ilaina amin’ny fifidianana. Nanao tantsoroka ara-bola tamin’ny fanontana ireo fitaovana ireo ny SACEM.
vendredi, 25 octobre 2019 22:35
Solika: Hanao tolobidy ny fitondram-panjakana amin'ny fanafarana mivantana
Namory ireo mpandraharaha solika ao amin’ny GPM (Groupement des Pétroliers de Madagascar) ahitana ny Galana, Vivo, Jovena, Total, LPSA ary GRT, tao Ambohitsorohitra ny tolakandron’ity zoma 25 oktobra 2019 ity, ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, vao tafaverina avy any Sotchi, nandray anjara tamin’ny fihaonana an-tampony Rosia-Afrika.
Nambaran’i Andry Rajoelina tamin’ireto mpandraharaha ireto fa hanao tolobidy ny fitondram-panjakana afaka fotoana fohy, amin'ny fanafarana mivantana solika mba hisorohana ny tsy fahampian'ny solika toy ny nitranga hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity, izay niteraka fitaintainana sy nampisavorovo ny saim-bahoaka sy ny nampihemotra ny raharaha ara-toekarena. Afaka mandray anjara amin’izany tolobidy izany na tsia ireo mpandraharaha solika misy eto ireo.
Nilaza ny filoha Rajoelina fa tsy nanaja ny voafaritry ny làlana ny amin’ny tokony hametrahana tahirin-tsolika 21 andro ireo mpandraharaha, fa 5 ka hatramin’ny 10 andro no nisy ka niteraka ny fikorontanana tamin’ny fitsinjarana solika teto an-drenivohitra.
vendredi, 25 octobre 2019 22:12
ASIEF 2019: Nibata medaly volamena roa Rasoarivelo Jeanne Pierrette
Mpiasan’ny Ministeran’ny Mponina Rasoarivelo Jeanne Pierrette. Nibata amboara sy medaly volamena roa izy tamin’ny taranja hazakazaka 400 m sy 800 m nandritra ny fifaninana ara-panatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana nokarakarain’ny ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires) ary notanterahina tany Antsiranana ny 07 hatramin’ny 20 Oktobra 2019.
Natolotry Rasoarivelo Jeanne Pierrette an’ny minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsôsialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy Naharimamy Lucien Irmah ny amboara.
vendredi, 25 octobre 2019 21:22
Tetikasa Building Amborovy: Sady tsy voahonitra ny vidin-tany no tsy misy asa mandeha
Ny alarobia 02 oktobra no nisy solotenan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, niaraka tamin'ny mpandrefy tany, fa ilaina izao dia izao ny tany anamboarana lalana hidirana amin'ilay tany anamboarana ny building, izay tetikasan'ny Filoham-pirenena.
vendredi, 25 octobre 2019 21:00
Solika: 72 tapitrisa litatra tonga ao Toamasina androany maraina
Niantsona ao amin’ny seranantsambon’i Toamasina, androany zoma 25 oktobra 2019 tamin’ny 6 ora maraina ny sambo mpitatitra solika Gulf Coral.
Solika miaty 72 tapitrisa litatra no entiny, mitsinjara ho lasantsy 17 100 000 litatra, gazoala 52 200 000 litatra ary solika fandrehitra 2 600 000 litatra no taterin'io sambo io.
Rahampitso sabotsy 26 oktobra 2019 avy hatrany dia hihazo tsikelikely ny tobin-tsolika an'Antananarivo ireo solika vao tonga ireo.
Manamafy ny OMH (Office Malgache des Hydrocarbures) fa mbola ampy tsara hiatrehana ny filàn’ny mpanjifa ny tahirin-tsolika eto Antananarivo.
vendredi, 25 octobre 2019 20:57
Rina Randriamasinoro: Manome lanja ny teny ifanomezana
Manohy ny fitetezana ireo Fokontany samihafa amin’ireo Boriborintany enina eto Antananarivo renivohitra i Rina Randriamasinoro. Mihaino ny hetahetan’ny mponina, mizara ny vina heveriny hanatsarana ny tanàna, miaina ny andavan’androm-piainan’ny mponina amin’ireo kartie samihafa.
Zava-dehibe amin’ity kandida amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra 2019 ity ny teny ifanomezana, ka itondrany ny anjara birikiny avy hatrany amin’ny asa sosialy.
vendredi, 25 octobre 2019 20:35
Anosibe An’ala: Zaza folo volana nalain’ireo jiolahy an-keriny
Nitrangana fanafihana mitam-basy tany amin’ny tanàna iray eo amin’ny PK32 amin’ny lalam-paritany mampitohy an’i Moramanga amin’Anosibe an’Ala, ny alin’ny alakamisy hifoha ity zoma 25 oktobra 2019 ity. Fito lahy mitam-basy nanafika toeram-pivarotana iray. Norobain’izy ireo ny vola sy entana ary nentin’izy ireo natao takalonaina ny zazakely vao 10 volana.
Nanaradia avy hatrany ny Fokonolona. Navelan’ireo olondratsy tany amin’ny PK13 ilay zaza, avotra soamantsara.